FAAHFAAHIN KU SAABSAN QASAARIHII KA DHASHAY QARAXII KA DHACAY MAGAALADA NAYROBI
Loading...	Home Wararka FAAHFAAHIN KU SAABSAN QASAARIHII KA DHASHAY QARAXII KA DHACAY MAGAALADA NAYROBI
FAAHFAAHIN KU SAABSAN QASAARIHII KA DHASHAY QARAXII KA DHACAY MAGAALADA NAYROBI	Saturday, 08 December 2012 22:57	Shan qof ayaa ku dhimatay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay lala eegtay Xildhibaan Yuusuf Xasan xilli uu doonayay in uu dadweeyne kula hadlo afaafka hore ee masaajid ku yaal wadada loo yaqaan Jam street oo ka tirsan xaafadda islii ee magaalada Nairobi.
Qaraxa ayaa dhacay xilli laga soo baxay saaladda Cishaha, waxaana xildhibaanka uu doonayay in uu qudbad u jeediyo dadweeyne fara badan oo halkaasi salaadda kusoo tukaday, haseyeeshee waxa goobta ka dhacay qarax bambaano oo lagu soo tuuray halkii uu xildhibaanku taagnaa.
“Qaraxa waxa uu ka dhacay iridda hore ee masaajidka, waxaan filayaa inuu ahaa Bam xildhibaanka lagu soo tuuray,” ayuu yiri Max’ed C/laahi oo kamid dadkii masaajidka ku sugnaa xilligii uu qaraxu dhacayay.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay hal qof, waxaana ay dhaawacyo isugu jira kuwo fudud iyo qaar halis ah ay kasoo gaareen ilaa sideed qof oo uu ku jiray xildhibaanka, kuwaasoo la dhigay isbitallada Madina Hospital iyo Aga Khan ee magaalada Nairobi, haseyeeshe ilaa afar qof oo kale ayaa la sheegay in ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray.
Saraakiisha Booliska Kenya ayaa sheegay in ay wadaan baaritaanno ku aadan qaraxa, waxayna sheegeen in qaraxani u muuqday mid la doonayay in lagu qaarijiyo xildhibaanka.
Xildhibaanka ayaa lagu soo waramayaa in ay dhaawacyo kasoo gaareen labada lugood iyo gacanta bidix, waxaana imika lagu daweynayaa isbitalka Aga Khan ee magaalada Nairobi.
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa mudooyinkii u danbeeyay waxa uu waday olole dhanka doorashooyinka ah, waxaana shalay salaaddii jimcaha kadib uu boqollaal qof kula hadlay masaajidka ku yaal wadada 12-ka ee xaafadda Islii halkaasoo ay dadweeynuhu ku weeydiinayeen su’aallo kala duwan.
Xildhibaanka ayaa xalay doonayay in uu la hadlo qaar kamid dadkii kusoo tukaday masaajidka oo iyagu doonayay in ay weeydiiyaan su’aalo.
Meydadka dadkii ku dhintay weerarkii xalay ayaa la filayaa in maanta la aaso, waxaana xaaladda Islii ay tahay saaka mid dagan, iyadoona uu caadi kusoo noqday dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo isu socodkii dadka iyo gaadiidka.